Tallaalada COVID-19 ee loogu talagalay Daryeel Bixiyeyaasha - SEIU 775 Benefits Group
Tallaalada COVID-19 ee loogu talagalay Daryeel Bixiyeyaasha
针对看护人的 COVID-19 疫苗接种 |Tiêm Vắc-Xin COVID-19 cho Chăm Sóc Viên |Вакцинация от COVID-19 для помощников| 간병인을 위한 COVID-19 백신 접종 | لقاحات كوفيد-19 لمزودي الرعاية |የኮቪድ-19 ክትባት ለጤና ክብካቤ ሰጪዎች |Vacunas contra el COVID-19 para los cuidadores
Jawaab u hel su'aalahaaga ku saabsan tallaalka.
Dhammaan Daryeel Bixiyeyaasha waxay Xaq u Leeyihiin Tallaalada COVID-19
oo Bilaash ah Bad-qabna leh
Dhammaan daryeel bixiyeyaasha waxay xaq u leeyihiin inay ku helaan tallaalka COVID-19 si bilaasha ah, isla haddeertaan.
Tallaalka waa badqab oo Washington State Department of Health, (DOH) (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington) waxay ku talisaa inaad qaadato mid sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo. Waxaad ka mid noqon doontaa in ka badan 50 milyan oo qof oo jooga Mareykanka kaliya kuwaas oo mar hore la tallaalay.
Si aad tallaalka u qaadato, waxaad u baahan tahay inaad raadsato goob kuu dhaw oo aad iska qorto.
Tallaalka bilaashka ah waxaa laga helaa goobo badan. Qasab ma ahan inaad leedahay ceymiska daryeelka caafimaad si aad u hesho tallaalka.
Hel goobta tallaalka ee kuugu dhaw adiga oo booqonaya bogga intarnetka ee Tallaal Tilmaamaha DOH. Raac tilmaamaha isku qorista tallaalka ee goobta tallaalka aad jeceshahay.
Haddii aad leedahay ceymiska caafimaadka ee Kaiser Permanente oo aad jeceshahay inaad tagto xarun ay Kaiser leedahay, raac tilmaamahan haddii aad heysato Kaiser Permanente Washington (KPWA) ama Kaiser Permanente Northwest (KPNW, kuwa ku nool degmooyinka Clark ama Cowlitz).
Haddii aad ku heysato ceymiska KPWA Puget Sound ama Spokane:
Gal akoonkaaga oo ku qabso ballantaada "E-visit" ("Booqashada Onleenka ah").
Si aad u buuxiso sahanka, waxaad u baahan tahay inaad gasho KPWA. Haddii aadan ka furanin akoon onleen ah KPWA, raac tilaamahan.
Isticmaal qaabkan hadii aad ku hadasho luuqad aan Ingiriis ahayn oo aad jeclaan lahayd adeegyo turjumaad, ama haddii aadan sameysan karin akoon onleen ah.
Haddii aad ku heysato ceymiska KPWA degmooyinka Clark ama Cowlitz:
Gal bogga intarnetka ee KPNW ama isticmaal app-ka Kaiser Permanente.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan tallaalka?
Jawaabo u hel su'aalahaaga ku saabsan tallaalka ee heeso.
Miyaan wali u sii baahnaan doonaa inaan xirto PPE oo aan dadka ka fogaado xitaa ka dib markaan tallaalka si buuxda u qaato?
Eeg Tilmaamaha CDC ee ku jra mowduucan. Xaaladaha badankood, iyada oo ku xiran tirada dadka iyo haddii dadka aad la joogto ay tallaalka si buuxdo u qaateen iyo haddii kalaba, waxaad wali u sii baahan tahay inaad xirato PPE oo aad dadka ka fogaato.
Xageen ka heli karaa tallaal?
Waxaa jiro meelo badan oo laga helo tallaalka. Eeg macluumaadka goobta tallaalka.
Goormuu macmiilkeyga heli karaa tallaalka?
Macmiilkaaga wuxuu heli karaa tallaalka haddadan. Macaamiisha badankood waxay xaq u yeesheen tallaalka markay ahayd Maarso 17 oo markay tahay Abriil 15 dhammaan dadka ka wayn da'da 16 sano jirka ah ayaa xaq u leh.
Maxaa dhacaya haddii aan qabo su'aal kale?
Ka ee booga intarnetka ee dhameystiran ee Washington State Department of Health (DOH) (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington) su'aalaha inta badan la isweeydiiyo, oo ay ku jiraan sida labada nooc ee tallaalada u shaqeeyaan, xaq u yeelashada dadka kala duwan ee inta lagu jiro wajiyada kala duwan iyo wax kale oo badan
Waxaad sidoo kale arki kartaa jawaabo badan oo laga bixinayo su'aalaha inta badan la isweeydiiyo ee Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Hay'ada Xakameynta Xanuunada iyo Kahortagga)
Tallaalka miyuu sababi doonaa waxyeellooyin?
Dadka qaar ee qaata tallaalka ayaa la kulma waxyeellooyin sida daal iyo qandho. Waxyeellooyinka tallaalka sida caadiga ah way iska fudud yihiin waxayna ku baxaan 1-2 maalmood. Waxay astaan u yihiin in tallaalka uu shaqeenayo.
Maxay ka dhigan tahay in tallaalka la qaato?
Booqoshadada waxay aad ula mid noqon kartaa booqashada dhakhtarka ee caadiga ah, waxay noqon kartaa rug tallaal oo ballaaran oo ku taala goob fagaaro, ama xittaa waxay noqon kartaa rug gaari oo aad ku jiri karto gaarigaaga, iyada oo ku xiran halka aad ballanta ku leedahay. Waxaa laga yaabaa nooc aqoonsi ah in lagu weydiiyo. Qaadashada tallaalka COVID-19 waxay la mid tahay tallaalada ama cirbadaha kale, iyada oo lagaa durayo qeybta kore ee gacantaada. Waxaa lagu fari doonaa inaad sugto ugu yaraan 15 daqiiqo ka dib marki lagu duro si loo xaqiijiyo inaadan yeelanin falcelin xasaasiyadeed.
Horay ayuu iigu dhacay COVID-19. Wali miyaan u baahanahay tallaal?
Haa. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Hay'ada Xakameynta Xanuunada iyo Kahortaga) waxay ku talisaa inaad tallaalka qaadato xittaa haddii uu horay COVID-19 kuugu dhacay sababta oo ah khuburada wali ma aysan ogaanin muddada aad difaac u lahaan karto inaadan dib u xanuunsanin kadib markaad ka kacdo.
Tallaalka badqab ma yahay?
Haa, tallaalada COVID-19 ee dadka la siinayo waa kuwa badqab ah oo waxtarna leh. Sida tallaalada kaleba, waxaa lagu soo saaray iyada oo la adeegsanayo isla tijaabooyin caafimaad iyo hab maamuusyo badqab oo adag. Isticmaalka tallaalka waxaa sidoo kale la sii wadaa in si dhaw loola socdo. Wax badan ka ogoow badqabka tallaalka.
Tallaalka bilaash miyuu u yahay daryeel bixiyeyaasha?
Haa. Qof kasta bilaash ayuu u yahay, iyada oo aan la eegin ceymiska daryeelka caafimaadka ee aad heysato, ama haddii aadan heysanin ceymiska daryeelka caafimaadka.
Haddadan meeqo daryeel bixiye ayaa horay u qaatay tallaalka?
In ka badan 200 milyan oo kuure ayaa lagu bixiyay Mareynka kaliya. Tani waxaa ka mid ah kumanaan daryeel bixiye. Waxaad eegi kartaa Johns Hopkins University Vaccine Tracker (Raadraacaha Tallaalka ee Jaamcada Johns Hopkins) si aad u aragto xogta laga hayo haddadan dhammaan dadka ku nool Mareykanka, iyo dunida.
Laga bilaabo Maarso 31, 2021, Washington State Department of Health, (DOH) (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington) uma sii baahan doonto cadeynta xaq u yeelashada tallaalka. Marka aad ballantaada qabsaneyso iyo marka aad tallaalka qaadaneyso, laguma weydiin doono cadeynta inaad xaq u leedahay.
Eeg bogga tallaalka ee SEIU 775.
Ka eeg booga intarnetka KPWA waxyaabaha ku saabsan tallaalka.
Wax badan oo tallaalka ku saabsan ka akhriso Washington Department of Health (DOH) (Waaxda Caafimaadka Gobalka Washington).
Ka eeg bogga intarneka ee Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Hay'ada Xakameynta Xanuunada iyo Kahortaga) wax ku saabsan tallaal qaadashada.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan tallaalada, fadlan soo wac, 1-877-606-6705. Fadlan ha wicin Member Resource Center (MRC) (Xarunta Macluumaadka Xubnaha), maadaama ay helayaan wicitaano tiro badan oo aysan awood u lahayn inay ku caawiyaan.